Ikhola ekhanyayo yezinja: amamodeli amahle kakhulu wesilwane sakho | Izinja Umhlaba
Ikhola ekhanyayo yezinja
Cabanga ukuthi uhamba nenja yakho ebusuku. Uyiyeka iye epaki bese uhlala phansi ukuze uphumule, noma uzivocavoca ngenkathi wazi ukuthi inja yakho iseduze kwakho. Kepha, ngokungazelelwe, inja yakho iyanyamalala futhi, noma ngabe uyibiza kangakanani, ayibuyi. Inkinga ukuthi nawe awuyiboni ngoba kumnyama kakhulu. Ungacabanga ukuthi ungazizwa kanjani? Manje cabanga ngaleso senzakalo kodwa nge ukhola okhanyayo wezinja.
Kwesinye isikhathi kuyadingeka ukuthi izinja zigqoke okokusebenza okwenza uhlale wazi ukuthi ikuphi, noma okubonakalayo kumabhayisikili, izimoto nezinye izimoto ukuze kugwenywe izingozi. Kepha yini okufanele uyazi ngamakhola wokukhanya kwezinja? Ngezansi singena kuzo.
1 Izinhlobo zamakhola akhanyayo ezinja
1.2 Iyakwazi ukwenziwa
2 Uyithengela nini izinja ikhola ekhanyayo
3 Ingabe amakhola wezinja akhanyayo aphephile?
4 Ungayenza kanjani ikhola ekhanyayo yezinja
5 Ungayithenga kuphi ikhola yenja enokukhanya
Izinhlobo zamakhola akhanyayo ezinja
MASBRILL Umgexo Okhanyayo ...
2 Amaphakethe Omgexo Okhanyayo...
I-ETACCU Dog Collar ...
Emakethe ungathola izinhlobo eziningi zamakhola akhanyayo ezinja. Olunye lwezigaba, nolomgexo othengiswa kakhulu, kungaba okulandelayo.
I-SONNIG LED Necklace ...
Lokhu okuyisisekelo kunazo zonke, kepha hhayi ngenxa yaleso sizathu sekhwalithi ephansi. Ungumgexo olula, okuyi lungisa intamo yesilwane ngaphandle kokuqinisa (futhi ayikhululekile). Ngale ndlela uzoyikhanyisa futhi uzokwazi ukuthi ikuphi ngaso sonke isikhathi lapho ubona ukukhanya.
Ikhola elikhanyayo elishajekayo lezinja lisho ukuthi linamabhethri ngaphakathi lapho, ngemuva kwesikhashana, adinga ukuvuselelwa. Banethuba lokuthi zihlala isikhathi eside, ngoba umjikelezo wamashaji ala mabhethri mkhulu.
Ingabe unayo inja ethanda amanzi? Ngemuva kwalokho kufanele ukhethe lolu hlobo lukakhola okhanyayo wezinja. Ngeke sikutshele ukuthi izokhanya ekujuleni okuphezulu, kepha ngeke ube nankinga lapho inja imanzi ngayo noma igxumela emanzini, izoqhubeka nokusebenza ngaphandle kwenkinga.
Uyithengela nini izinja ikhola ekhanyayo
Ayikho iminyaka ebekiwe ukuthenga ikhola elikhanyayo lenja yakho. Empeleni, ngokusebenza njengomhlahlandlela lapho uzohamba nayo, iqiniso ukuthi ungayisebenzisa kusukela lapho umdlwane usuvele ugonyiwe futhi ungahamba nayo.
Vele kunemisebenzi lapho kunconyelwa khona okuningi, ikakhulukazi uma uyogijima nenja yakho, noma uyigqoka ingakhulumi noma ibhande, ukuthi uphume ebusuku (ngoba kuyindlela yokwazisa abanye ubukhona bayo), njll.
Ingabe amakhola wezinja akhanyayo aphephile?
Okwamanje kungenzeka ukuthi uyazibuza ukuthi ukubeka ikhola ekhanyayo enjeni yakho kuyinto enhle noma, kunalokho, kuthinta impilo yakhe. Iqiniso ukuthi empeleni akufanele lifake noma iyiphi ingozi. Iningi lamakhola okukhanya linamaketanga amalambu aholile, futhi lokhu, yize kunika ukukhanya, ngoba izinja zinamandla amancane (ngaphezu kwalokho ngeke zikubone ngoba ukukhanya akuhambi ngqo emehlweni azo).
Kodwa-ke, uma uhlala uzolile ngokwengeziwe, ungasebenzisa lolu hlobo lwemigexo kuphela lapho uphuma ukuyohamba naye. Ngale ndlela, ngaphezu kokungawaqedi amabhethri, futhi ugwema ukuba nesibani okungathi, kamuva lapho uphumule, sikuphazamise ulale.
Ungayenza kanjani ikhola ekhanyayo yezinja
Kungenzeka ukuthi, esikhundleni sokuthenga ikhola ekhanyayo yezinja, ufuna ukuzakhela wena. Futhi yebo, iqiniso ukuthi ungakwenza. Konke okudingayo ukuba nazo zonke izinto kutholakale kalula.
Ukuze wakhe eyodwa uzodinga okulandelayo:
Isixhumi sebhethri nebhethri.
Inqubo ilula impela. Lapha thina imininingwane okuyizinyathelo okufanele zilandelwe:
Kufanele uqale ulungise ukuphela kwetheyiphu eholelwe endwangu. Le ndwangu kufanele ibe ubude obudingayo ukumboza intamo yenja yakho. Uyilungisa kanjani? Yebo, ngenaliti nentambo kuzofanele uyithunge. Manje, kufanele uyilungise ezingxenyeni eziningana ukuze ingasuki endwangwini. Lokhu kungenziwa ngokwakha izimbobo ezincane endwangweni ukuze kudluliswe iribhoni noma, ngentambo, uyidlulise kaningi sengathi uyisebenzisa njengeyunithi yezinhlamvu.
Manje njengoba usuyilungisile ithephu eholelekile, sekuyisikhathi sokuthunga i-velcro ekugcineni ngakunye ukuze ukwazi ukuvala umgexo futhi uwenze uboshwe ukuze ungaphumi.
Thatha isixhumi sebhethri, nebhethri. Ngaphambi kokumboza umugqa oholelekile nge-velcro, kufanele uyixhume kusixhumi ukuze isebenze. Ukuze wenze lokhu, kuzodingeka ujoyine izintambo (ngayinye endaweni yayo) bese uzihlanganisa ukuze zingaphumi. Vele, qiniseka ngaphambi kokwenza kanjalo ukuthi izintambo, ezibekwe ngendlela ozozihlanganisa ngayo, zenze umugqa oholelekile uvule (zine-polarity efanele). Ngokungeziwe ekukuhlanganiseni, sincoma ukuthi ungeze i-silicone encane.
Kufanele nje umboze umugqa oholile nge-velcro.
Umgexo ucishe ukulungele ukusetshenziswa. Ukuphela kwento esele ukuthunga umucu onwebekayo bese ufaka ibhethri lapho. Kufanele yenziwe kahle futhi ingakhululeki kakhulu ukuze ibhethri likwazi ukubamba kahle.
Futhi yilokho kuphela! Kulula ukukwenza yize kubonakala kunzima kakhulu.
Ungayithenga kuphi ikhola yenja enokukhanya
Manje njengoba usubonile yonke imininingwane ngamakhola akhanyayo ezinja, Kujwayelekile ukuthi ufuna ukwazi ukuthi ungayithola kuphi, akunjalo? Yebo, sizokunikeza izinketho eziningi ongakhetha kuzo.
Amazon: Yindlela yokuqala esiyincomayo, futhi siyayenza ngoba kulapho uzothola ukuhlukahluka okuningi. Uzoba namamodeli ahlukene, osayizi, imibala ...
kiwiko: I-Kiwoko isitolo sezinsiza zezilwane futhi, ngenxa yalokho, ukuthenga ikhola elinokukhanya kwezinja kungenye indlela onayo esitolo. Noma kunjalo, abanazo izinhlobo eziningi, bambalwa kuphela. Kepha zivela kumamodeli azi ukuthi athengisa kakhulu.
Tendenimal: Kulokhu, njengakuqala, sikhuluma nangesitolo esigxile ezifuyweni. Ngokuphathelene namakhola anokukhanya kwezinja inamamodeli amaningana, hhayi eziningi, kepha ezinye zitholakala kakhulu kunoma yiluphi uhlobo lwenja.
I-Aliexpress: Enye inketho uma ungenankinga nokulinda isikhashana futhi engenayo ngezinsuku eziyi-1-2 yi-Aliexpress. Kulokhu, ungathola okuhlukahlukene impela, cishe njengaku-Amazon. Okubi kuphela ukuthi kuzokuthatha isikhashana ukufika.
Uke wazama ikhola yenja ngokukhanya? Ucabangani ngesipiliyoni?
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Izesekeli zezinja » Ikhola ekhanyayo yezinja